Jurgen Klopp oo ka warbixiyay xaalada Emre Can iyo James Milner kahor kulanka finalka Champions League – Gool FM
Dajiye May 24, 2018
(Liverpool) 24 Maajo 2018. Macalinka reer Germany ee Jurgen Klopp ayaa wuxuu xaqiijiyay in labadiisa xidiga ee Emre Can iyo James Milner in ay diyaar u yihiin kulanka Real Madrid Champions League ee Sabtida soo aadan.
Emre Can ayaa wuxuu dib ugu soo laabtay tababarka kooxda Liverpool, kadib markii uu dhaawac dhanka dhabarka ah ku maqanaa dhowr bilood, wuxuuna xaqiijiyay Klopp inuu diyaar u yahay kulanka Real Madrid ee Sabtida.
Halka sidoo kale James Milner uu maqnaa kulamadii ugu dambeeyay ay ciyaartay kooxda Liverpool, wuxuuna markale dib ugu soo laabtay tababarka kooxda Reds, wuxuuna diyaar u yahay inuu ka qeyb galo kulankooda ugu muhiimsan ee xili ciyaareedkan.
Emre Can iyo James Milner ayaa waxay kusoo baxeen liiska xidigaha uu Jurgen Klopp u soo xushay in ay ula safraan magaalada Kiev ee ka dhici doona finalka Champions League sabtida soo aadan.
Liverpool ayaa tababarkeeda ku dhameysatay xarunta Milwood kahor duhurnimada maanta oo khamiista ah, kahor 48 sacadood dhacdada xiisaha badan ee finalka Champions League.